Apple Watch enwere ngwa ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ngwa igwe kwụ otu ebe maka elekere apple - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Apple Watch enwere ngwa ịgba ígwè?
Ọsọ na anya:Apple WatchUsoro 2 ma ọ bụ mgbe e mesịrịnwereGPS arụnyere na iji soro usoro ndị a wee nye map nke n'èzí gịokirikirina nchịkọta mgbatị na iPhone gị.bọchị 2020
Bịanụ na GCN, ngwa ngwa ịgba ịnyịnya ibu iri. Nke mbụ na ndepụta anyị bụ ngwa ọhụụ akpọrọ Fitness AR. Nke a bụ ntakịrị ntakịrị ọhụụ n’ọdịniihu, kamakwa ọ bụ eziokwu gbasara nkọwa zuru ezu maka ị na-agba ịnyịnya gị emerela n’oge gara aga.
Otu igbe eserese esiri jiri ya rụọ ya, ọ bụ ezie na ọ gaghị enyere gị aka imeziwanye dị ka onye na-agba ígwè, ọ bụ ezigbo ngwa mara mma. Ọ na-ewepụta map 3D nke ịnya gị n'elu tebụl kichin gị ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị dị larịị. Ọ dị nwute, dịka anyị na-edekọ nke a, ọ dị naanị na ngwaọrụ IOS.
Endomondo bụ ngwa a ma ama nke gbara kemgbe 2007 Ma na mgbakwunye na nsuso na ịdebanye ịnyịnya gị, ọ na-arụkwa ọrụ dị ka onye nchịkwa na onye ndụmọdụ ọ bụrụ na ịchọrọ, na-agba gị ume na njem gị ma na-eme ka ị mara mgbe ị rụzuru ebumnuche gị. Enwekwara ahụ ike zuru ụwa ọnụ nke na-enye gị ohere ijikọ na ndị nwere mmụọ iche echiche gburugburu ụwa na ọkwa dị egwu na ewu ewu. You chọghịzi kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ iji sonye.
Site na ngwa IOS na ụlọ ahịa ahụ, naanị ịkwesịrị ịnwe onye na-enye ọzụzụ na ihe mmetụta Bluetooth na wiil azụ na kọmputa, na-enweghị ịpasa igwe kwụ otu ebe gị na kọmpụta ma ọ bụ na ntụgharị. E nwekwara ụfọdụ ozi ọma maka ndị na-abụghị Apple ekwentị ma ọ bụ ndị ọrụ iPad. Ngwa gam akporo dị na nso nso.
Ọ bụrụ na ị dị ezigbo mkpa maka ọzụzụ, ngwa nkuzi Ọzụzụ maka gị bụ n'ezie. The ngwa synchronizes with your Training Peaks account. Ọ na - enye gị ọtụtụ nkọwa zuru oke gbasara usoro ọzụzụ gị ọ bụrụhaala na ịchọrọ n'ọdịnihu.
Ikekwe ọbụlagodi oge ahụ. Maka ndị gị na onye na-enye gị ọzụzụ, ọ na-egosi gị oge ọzụzụ onye nkuzi gị zubere maka gị. Onye na-enye gị ọzụzụ nwere ike ịhụ ma ị mezue ha ma ọ bụ na i mechaghị.
Ọ dị mma maka ndị na-eme mgbatị ahụ. Ngwa na-esote abụghị ngwa igwe eji agba ịnyịnya ígwè, mana ọ ka baara anyị uru nke ukwuu. Ọ na-eme ihe ọ na-ekwu na tin.
Windfinder hụrụ na Ikuku. Na ihe na-eme ka anyị kwe omume You na-eme atụmatụ ụzọ gasị n'ụzọ zuru oke ka anyị wee nwee ifufe ọdụ dị mma nke anyị nwere ike iji wee kwọpụ n'ụlọ. Na akụkụ nke mbụ nke njem ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi ya ka ị nwee ike ịkwọ ụgbọ mmiri site n'okporo ụzọ mara mma echebere.
Ọ bụ ezie na ị nwere ọtụtụ isi na-egosi gị ikuku mgbanwe mgbanwe ụbọchị. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ma zubere ụzọ gị nke ọma. Nwere ike ịnwe ịnya ịnyịnya nke nwere ọtụtụ ụzọ, were ya.
Ọ dị mma maka ndị agbụrụ nọkwa ebe ahụ, ụfọdụ ndị otu World Tour na-ejikwa ya. Maka na ị nwere ike igosipụta ụzọ nwere ike ịdị ize ndụ n'okporo ụzọ. Yabụ ị nwere ike ịkwadebe nke ọma ma hapụ ndị gị na ha ga-ata ahụhụ na gọta.
Anyị enweghị ike ịnwe ngwa ngwa igwe ịgba egwu iri na enweghị Strava. Ngwa kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ bụ ihe mgbatị mgbatị ahụ nke na-edekọ ọsọ, anya, na ndị ọbịa niile nke arụmọrụ arụmọrụ.
Mana akụkụ kachasị ewu ewu nke ngwa a ma ọ dịkarịa ala n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè siri ike ga-abụ ngalaba. Onweghi ihe dika ichichara ibu eze ma obu eze nwanyi n’elu ugwu n’elu ugwu gi. Ọ bụrụgodi na nke a na-esiwanye ike karịa oge.
Karịsịa ebe ọ bụ na ndị mmadụ na-eji Stravain na njikọ na Windfinder maka naanị otu oge. Otu-aka Strava ndekọ ngwa ga-azọpụta gị obere oge na mmalite nke gị na-agba ịnyịnya. Niile i nwere ime bụ pịa ngwa na ekwentị gị na Strava ga-amalite Ndekọ njem gị.
Ọ gaghị adị mfe. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-agba mgba maka ntakịrị mkpali, ị nwere ike ịnwale ngwa ọzọ a na-akpọ My Virtual Mission. Iji ngwa ahụ ị nwere ike ịtọ ihe mgbaru ọsọ nke onwe ma ọ bụ otu ma ọ bụ soro na otu n'ime nsogbu dị iche iche ị na-eche.
Ugbu a otu n'ime ebumnuche gị nwere ike ịbụ, dịka ọmụmaatụ, iji mee njem gaa nke ọma na Beijing. Gaghị agaba na Beijing n’ezie. Mana ngwa ahụ dekọtara kilomita gị gbakọtara ka ị wee hụ etu ị si nọrọ nso na njedebe gị na ngwa ndị mebere.
Ka anyị chee ya ihu, ịkwọ ụgbọ mmiri na mmiri abụghịkarị ihe na-atọ ụtọ. Ya mere zere ya na niile akwụ ụgwọ site na iji a ọzọ ngwa akpọ Rain Alert. Kedụ maka ngwa mkpu mmiri ozuzo? didis na - enye gi ezigbo oge ihu igwe ka i wee hu ndi agha ma obu mmiri ozuzo na - abia ma dozie uzo gi ma obu oge njem gi.
Enwere ọtụtụ ụzọ eji eme atụmatụ ụzọ dị ugbu a, mana nke anyị na-eji ọtụtụ nso nso a ka a na-akpọ Komoot. Ọ na-enye gị ọtụtụ nhọrọ dị iche iche mgbe ị na-eme atụmatụ ụzọ si A ruo B. Nke a bụ ụzọ dị mma iji chọta ụzọ ọhụrụ na ụzọ ọhụrụ.
Ọ na-arụkọ ọrụ na ngwaọrụ ndị dakọtara ma na-enye gị ikike ịbịa, gbanwee ntụgharị ụda olu ma mee ka ụzọ gị dị na offline, nke dị mma maka mpaghara ndị na-enweghị nnukwu mkpuchi 3G. Ndị a bụ ngwa ịgba ịnyịnya igwe anyị kachasị mma ugbu a. Ma ihe anyị ga-achọ ịmata bụ ma ọ bụrụ na anyị agbaghara ngwa ọdịnala nke ị ga-achọ iji mee ihe nwere ike ikwurịta ya na anyị na ndị ọzọ na-ekiri anyị na ngalaba kwuru n'okpuru isiokwu a.
Ọ bụrụ na ịdenyeghị aha GCN, ị nwere ike ime nke a ugbu a site na ịpị ụwa. Na ederede ole na ole ịchọrọ ịlele ugbu a. Nke mbụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụwa nke ngwa ngwa ịgba ígwè abịala na afọ ole na ole gara aga.
Anyị mere iri kachasị elu na mbido 2014 na isiokwu a dị n'okpuru ebe a. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị hụbeghị ihe ngosi GCN ma ọ bụ na ị funahụ nke kachasị ọhụrụ, ọ dị ebe a.
Kedu ka m ga-esi tinye ịnyịnya ígwè na Apple Watch m?
Na-agba ịnyịnyanke giigwe kwụ otu ebenaApple Watchdị mfe. Naanị eyinche, pịa 'mmaliteịgba ígwè'na mgbatị ahụ ngwa ma na-akpụ akpụ! Chọghị sensọ mpụga ọ bụla (dịka ọsọ, cadence, ọnụego obi),Leleena-enye ihe niile achọrọ iji rụọ ọrụ nyocha.Sep 27 2018
Ndewo, nabata azụ na Gunner Channel, n'isiokwu a anyị ga-egosi gị otu esi eji Google Map maka Bikes. Sapeta GPS mbụ, wee mepee ngwa Google Map na ekwentị gị. Ihe nrịba aka na-acha anụnụ anụnụ bụzi ebe anyị nọ ugbu a, biko tinye ebe ị na-aga na igbe dị n'elu, anyị ga-eji Universal Studios Singapore dị ka ebe anyị na-aga, pịa ntụpọ dị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, ụzọ ndabara maka iji ụgbọala, nke a bụ maka ọha na eze jiri ationgbọ njem dị ka ụgbọ oloko na bọs.
Mgbe ahụ, anyị nwere ike ide akwụkwọ site na google map họrọ nhọrọ na-esote nke dị n'ụkwụ. Ọ bụrụ na emere ederede a, ịgba ịnyịnya ígwè abụghị nhọrọ na Singapore yabụ ịga ije bụ nhọrọ ọzọ iji. Ọ na-ewe anyị awa 2 na 9 nkeji iji gaa Universal Studio site na ebe m nọ ugbu a.
Nke a bụ mgbe anyị na-eje ije, mana ọ ga-abụ ọsịsọ ma ọ bụrụ na anyị agbaa ịnyịnya ígwè, mgbe anyị batara anyị nwere ike ịhụ ụzọ ahụ, akara akara acha anụnụ anụnụ bụ ụzọ bụ isi yana isi awọ bụ ụzọ ọzọ, ọ dị mma. Ka anyị bido. Izizi ekwesịrị m ịmeghe igwe kwụ otu ebe n'ihi na m na-eji oBike, otu ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na Singapore.
Nwere ike ịhụ otu esi eji oBike na njikọ dị n'elu. M na-ejikarị Cyclyck eme ihe mgbe m na-eji Google Maps ma ọ bụ kpọọ Pokemon Go. Cyclyck na-enye aka n'ezie ebe ọ bụ na anyị anaghị akwụsị akwụsị ma lelee mkpanaka mgbe anyị na-agba ịnyịnya ígwè.
Fechaa, mfe iji, inogide na ọnụ, nke a bụ ihe mere m na-eji Cyclcyk. Nwere ike ịlele nkọwa nke Cyclyck na nkọwa dị n'okpuru ebe a, m dị njikere ugbu a ịga .Anyị nwere ike ịhụ na ka anyị na-agagharị, akụ ahụ na-agakwa dị ka ọnọdụ anyị si dị.
Nwekwara ike ịnụrụ ntuziaka ka ị kwaga aka nri ma ọ bụ aka ekpe site na ngwa a. Universal Studios Singapore dị na Sentosa Island. Ya mere, achọrọ m ịchọta ogige igwe kwụ otu ebe ma gaa n'ihu n'ụkwụ.
N'ihi na anyị enweghị ike iji igwe kwụ otu ebe n'ime agwaetiti Sentosa, naanị ị ga-aga ije dị mita ole na ole ArrivedYes, mechara rute Universal Studios Singapore. Nke ahụ bụ maka nkuzi Google Map maka Igwe, ị nwere ike ịhapụ okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla echefula ịmasị ma denye aha na ọwa anyị, daalụ !!!
Apple Watch ịgba ịnyịnya ziri ezi?
Ndị a bụ ma kemfe kemfe iji nweta, na mgbe ụfọdụịgba ígwèngwa makaApple Watchna-enye ụdị nke nlekota elu, nke a ga-abụ ihe ọzọziri ezina nwa afọ ndịapụlFitness ngwanrọ. Site na ngwanrọ,apụlMaapụCygba ígwèA na-ewu ọnọdụ site na ala ruo nchekwa ma dị oke egwuziri ezi.Sep 16 2020
Kedu Apple Watch kachasị mma maka ịgba ígwè?
Linggba ọsọ kacha mmasmartwatch maka ahụ ike niile
IheApple WatchSeries 6 tracks data si multiple egwuregwu na nwere a wuru na-altimeter. Ọ bụ ezieịgba ígwèagụnyere na ndepụta egwuregwu ya, ọ gaghị ejikọ ya na ihe mmetụta sensọ ma ọ nwere nlele anya ejiri aka aka rụọ.Eprel 1 2021
Kedu ngwa ịgba ígwè na-arụ ọrụ na Apple Health?
Zwift bụ ọzụzụ ime ụlọngwa igwenke gbanwere ụwa nke ime ụlọịgba ígwè. Ọ bụdakọtarana ọtụtụ iOS ngwaọrụ (iPhones na Macs) na bụAPỤLTV na-akwado. Ọ na-akwado ugbu aGam akporongwaọrụ.
Kedu ihe kpatara Apple Watch anaghị agụ ịgba ịnyịnya n'èzí?
Na nke gịiPhone, gaa na: Ntọala> Nzuzo> Motion & Fitness - chọpụta na ma Fitness Tracking na Health na-arụ ọrụ. Na nke gịiPhone, n'imeLeleengwa, gaa na: MyLelee> Nzuzo> Motion & Ahụike - gbanye nsuso Ahụike na Ọnụego Obi.Sep 9 2017
Apple Watch ọ na-agbanwe ịgba ịnyịnya ígwè ka nzọụkwụ?
O di nwute,Apple Watch, Fitbit, na ndị ọrụ nlere ndị ọzọmeeeweghara kwekọrọnzọụkwụmakaigwe kwụ otu ebe. Nke a bụ n'ihi na ọrụ Monitors dị kaApple Watch, Fitbit, Garmin, na Xiaomi Mi Band na-agụtanzọụkwụdabere na ogwe aka ije. Ogwe aka gị na-anọkarịrị anyịnya mgbe ịnọ aigwe kwụ otu ebe.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agụ dị ka mgbatị na Apple Watch?
Ọmụmaatụ, naApple Watch(ọgbọ nke mbụ) na usoro nke 1, ndịnchenwere ike ịnweta data Ọrụ Ọnọdụ site na ụzọ abụọiPhoneọ bụrụ na ewere ya n'ogen'èzína-eje ije, na-agba ọsọ naịgba ígwèmgbatị. Nọvemba
Kedu ihe kpatara ịgba ịnyịnya anaghị agụta dị ka usoro na Apple Watch?
N'ihi nanzọụkwụdịgụọdabere na ogwe aka ije (kpọmkwem swinging ogwe aka mgbe na-eje ije / na-agba ọsọ) ọ bụ ike soronzọụkwụmgbe ogwe aka gị dịkarịrị njegharị na njikwa igwe kwụ otu ebe. N'ihi nke a, gị anya ozi ga-ejikari-ezighi ezi dị ka nke ọma.Ọgọst 5 2018
Ndi iPhone na-aguta onu mgbe ha na-agba igwe?
Dị ka nkeiOS8.3 enwere mmelite karịa 8.1, manaiPhone6 na-aga n'ihu na ndekọnzọụkwụmgbeịgba ígwèna mgbakwunye nana-agụtaụgbọ elu emere makaịgba ígwèngbanwe di elu. Kachasị mma iji ngwa ndị ọzọ nke na-akwụ ụgwọ oge pedometerịgba ígwèdị ka Cyclemeter.Eprel 9 2015
Enwere ngwa ịgba ọsọ ọ bụla na Apple Store?
Ngwa a dị naanị na Storelọ Ahịa App maka iPhone, iPad, na Apple Watch. Cyclemeter bụ ngwa kachasị elu maka ndị na-agba ígwè. Wuru maka iPhone, iPad, Apple Watch, na iCloud, ọ na - eme iPhone gị ka ọ bụrụ kọmpụta dị ike - yana maapụ, eserese, nkewa, etiti oge, laps, ọkwa, mpaghara, atụmatụ ọzụzụ na ndị ọzọ.
Enwere ike iji Apple Watch maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Gbanyụọ ha na ihe ndị dị n'okpuru. Ma ị bụ onye ọhụụ ọhụrụ Apple ma ọ bụ nwee ngwa mgbatị ahụ ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya maka ịgba ọkụ ọkụ na ọdụ ụgbọ oloko n'ụtụtụ, ọ bụghị ihe ịtụ ụjọ ka ị ga-atụ ụjọ mgbe mbụ ịmalitere ya.
Bụ okirikiri nsuso ngwa na Apple Watch 6?
Ngwa Cycle Tracking bụ akụkụ nke watchOS 6. watchOS 6 dakọtara na Apple Watch Series 1 na mgbe e mesịrị. Nwelite na watchOS 6 chọrọ iphone 6s ma ọ bụ emesịa na-agba ọsọ iOS 13 ma ọ bụ karịa. Na iPhone gị, mepee Health ngwa wee pịa taabụ nchọgharị. Kpatụ Nyocha usoro.